Primobolan အမှုန့် (Methenolone Acetate) အမျိုးသမီးများအတွက်အလုံခြုံဆုံးဟို Steroid တစ်မျိုး၏တဦးတည်း
/ဘ‌‌လော့ခ်/Methenolone Acetate , Pregabalin/Primo (Methenolone Acetate) အမျိုးသမီးများအတွက်အလုံခြုံဆုံးဟို Steroid တစ်မျိုး၏တဦးတည်း
အပေါ် Posted 12 / 07 / 2017 by ၏ ရေးသားခဲ့သည် Methenolone Acetate, Pregabalin.
Primobolan အမှုန့်အချို့ကိစ္စများတွင်ရောဂါများဖြုန်းကြွက်သားကုသရန်အသုံးပြုသည်, သို့သော်ပုံမှန်အားပျော့ကိစ္စများတွင်သို့မဟုတ်ဘယ်မှာတစ်ခုကိုယ်ခံစွမ်းအားမြှင့်တင်ပေးမယ့်အကျိုးကျေးဇူးသာ။ ဤသည် Steroid တစ်မျိုးနဲ့တူအစုလိုက်အပြုံလိုက်အပေါ်ထုပ်ပိုးသွားမထားဘူး Anadrol or Deca Durabolin အများစုယောက်ျားတစ်ဦးကိုချွတ်-ရာသီ bulk သံသရာအတွက်ကြောင့်အများကြီးအသုံးပြုမှုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ကျွန်တော်တို့သည်သို့သော်အမျိုးသမီးတစ်ဦးခြွင်းချက်စေနိုင်သည်။ အမျိုးသမီးများ ပို. ထိခိုက်မခံတဲ့ဟိုစတီရွိုက်မှဖြစ်ကြပြီးတစ်ဦးပျော့ဟို Steroid တစ်မျိုးတစ်နည်းနည်းရှည်သွားနိုင်ပါတယ်။ ရုံအရေးကြီးသောအဖြစ်အများဆုံးအမျိုးသမီးတွေနေ့ချင်းညချင်းအလေးချိန်၏ 30lbs ရဖို့ရန်ရှာနေကြသည်မဟုတ်။ အလေးချိန်အတွက်အသေးစား, အလယ်အလတ်တိုးမကြာခဏမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ စိတ်ထဲအတွက်ပျော့သဘောသဘာဝ Keeping, စစ်မှန်သော Off-ရာသီစက်ဝန်းအဘို့ဤ Steroid တစ်မျိုးကိုအသုံးပြုဖို့သူအပါဆုံးယောက်ျားစိတ်ပျက်ကြလိမ့်မည်။
Primobolan ကိုလည်းကောင်းစွာအားကစားစက်ဝိုင်းထဲမှာတန်ဖိုးထားသည်။ ခွန်အား၌တစ်ဦးကအလယ်အလတ်တိုးတက်မှုကဒီ Steroid တစ်မျိုးနှင့်အတူအလွန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ခွန်အားအာဏာနှင့်မြန်နှုန်းမှအောင်မြင်သော athleticism မှ key ကိုဒြပ်စင်နှစ်ခုလုံးကိုရညျညှနျးနိုငျသညျ။ သို့သော်ဤ Steroid တစ်မျိုးအမှန်တကယ်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မည်သည့်နေရာတွင်ပြန်လည်နာလန်ထူ၏မြှင့်တင်ရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြွက်သားခံနိုင်ရည်ကိုလည်းတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်ပြီးယင်းသို့စရိုက်များသူတို့အများအပြား steroids နှင့်အတူကဲ့သို့ခိုင်ခံ့ခြင်းရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေစဉ်ကိုမဆိုထုရိုက်မှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမဖုထက် သာ. ကောင်း၏။ ကပျော့ Steroid တစ်မျိုးရဲ့အဖြစ်ထပ်မံသည်, အားကစားသမားအရွယ်အစားကြီးမား buildups နှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အချို့ကိစ္စများတွင်ထည့်သွင်းအရွယ်အစားအများကြီးအားကစားသို့မဟုတ်အနေအထားကို မူတည်. စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ အခြားဖြစ်ရပ်များမှာ, prying မျက်စိနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီမှမလိုအပ်သောအာရုံကိုအများကြီးယူဆောင်လာနိုငျသညျ,
ဘယ်မှာမှ အွန်လိုင်းစစ်မှန်သော Primobolan အမှုန့် (Methenolone Acetate အမှုန့်ကိုဝယ်?
Primobolan အမှုန့် (Methenolone Acetate အမှုန့်အရင်းအမြစ်ကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်သင်ရှာတွေ့နိုင်သည်၊ သို့သော်) Primobolan အမှုန့် (Methenolone Acetate အမှုန့်ကိုအွန်လိုင်းတွင် ၀ ယ်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ စျေးကွက်တွင်ကုန်ပစ္စည်းအတုများရောင်းသည့်ရင်းမြစ်များစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့် Primobolan (Methenolone Acetate) ကုန်ကြမ်းများကိုအွန်လိုင်းတွင်ဝယ်ယူသောအခါ သင်ရွေးရန်လိုသည် realiable အရင်းအမြစ်.
တစ်ဦးကုထုံး setting ကို, စံအထီးအတွက် Primobolan ဆေးများ အဆိုပါ 100-150mg တစ်နေ့လျှင်အကွာအဝေးအတွင်းလဲကျပါလိမ့်မယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်အထိဆေးများလည်းတူညီသောအကွာအဝေးအတွင်းလဲကျပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်များစွာသောလူတို့သညျတစ်နေ့လျှင် 50-75mg သကဲ့သို့နည်းနည်းနှင့်အတူလျောက်ပတ်သောရလဒ်များကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ။ ပိုမိုမြင့်မားသောဆေးများမျှမျှတတကောင်းစွာသည်းခံနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အများစုကစာရင်းပ္ပံ၌စောင့်ရှောက်မည်။ အများစုမှာယောက်ျားကအခြားဟိုစတီရွိုက်နှင့်အတူဒွန်တွဲသည့်အခါဤအထိုးအကွာအဝေးစုံလင်သည်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ဘုံထပ် Trenbolone, Masteron, Anavar သို့မဟုတ် Winstrol ပါဝင်နိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဆေးထိုးခြင်း, Primo တစ်ခု 8 တပတ်ပြေး standard တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒါကတစ်ခုလုံးကိုသံသရာသေချာပေါက် 8 ရက်သတ္တပတ်ရှည်လျားသည်မဆိုလိုပါဒါပေမဲ့ဒီသံသရာ၏စံ Primo တစျပိုငျးကိုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးကုသမှုအစီအစဉ်များကိုအောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့်, Schering အမျိုးသမီးတစ်ဦးစံဟောဒီမှာလမ်းညွှန်ဖြန့်ချိမထားပါဘူး။ စွမ်းဆောင်ရည်စက်ဝိုင်းထဲမှာ, စံအမျိုးသမီး Primobolan အမှုန့်ထိုးအကွာအဝေးတစ်နေ့လျှင် 25-50mg မှာဖြစ်လိမ့်မည်။ အများစုကအမျိုးသမီးတွေမျှမျှတတကောင်းစွာထိုကဲ့သို့သောထိုးသည်းခံနိုင်ဖြစ်သင့်သည်။ သို့သော်အမျိုးသမီးအများစုပိုကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ကို Anavar ကဲ့သို့ Steroid တစ်မျိုးနှင့်အတူ Primo တစ်အောက်ပိုင်းထိုးဖွစျလိမျ့မညျကိုတွေ့လိမ့်မည်။ Anavar သို့မဟုတ်အခြားဟို Steroid တစ်မျိုးကဆက်ပြောသည်လျှင်သင် Primo အနိမ့်ထိုးဒါမှမဟုတ်သင် virilization ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်သိမ်းထားချင်ပါလိမ့်မယ်။ မည်သို့ပင် stacking ၏တစ်ဦးပထမဦးဆုံး Primobolan သံသရာတစ်နေ့လျှင် 25mg နှင့်အတူစတင်သင့်တယ်နှင့်မျှမမြင့်မား။ စုစုပေါင်းအသုံးပြုမှု6ရက်သတ္တပတ်ကျော်လွန်တိုးချဲ့သင့်ပါဘူး။ အများစုမှာ 4-6 အပတ်ကနှစ်တိုးစုံလင်သောဖြစ်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
Tags: Methenolone Acetate အမှုန့်ကိုဝယ်, Primobolan အမှုန့်ကိုဝယ်, Methenolone Acetate အမှုန့်, Primobolan အမှုန့်
16961 Views စာ
အဘယ်သူမျှသင့် Trenbolone Acetate အကြောင်းကို 10 ဖြစ်ရပ်မှန်များကိုပြောပြလိမ့်မယ်	AASRAW ထံမှ Vardenafil Hydrochloride ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါဘယ်လိုနေသလဲ?